Madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo inuu saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo Raysal wasaaraha cusub ee Soomaaliya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo inuu saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo...
Madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo inuu saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo Raysal wasaaraha cusub ee Soomaaliya
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heleyso Shabakadda HOL ayaa sheegaya in la filaayo in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqi doono madaxweynaha Soomaaliya Raysal wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gabagabeeyay kulamadii iyo la tashiyadii ugu dambeeyay ee uu ugu guur galayay soo magacaabista wasiirka koowaad ee Soomaaliya.
Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa mashquul xoogan laga dareemayay Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya oo ay buux dhaafinayeen shaqsiyaad kala duwan oo si weyn u doonayo in loo magacaabo xilka Raysal wasaaraha Soomaaliya, kuwaas oo ay ka mid yihiin rag horay ugu dhex jiray saaxadda siyaasadda iyo kuwa haatan ku cusub siyaasada Soomaaliya.
Dastuurka dalka Soomaaliya waxaa ku qorneyn in madaxweynaha marka la doorto uu muddo 30 cisho gudahood ku soo magacaabo Raysal wasaare, waxaana xusid mudan in Axdi Qarameedkii lagu soo dhisay dowladdii KMG aheyd ee Imbagati uu dhigayay in madaxweynaha 30 cisho gudahood uu kusoo magacaabo Raysal Wasaare, taasoo noqotay dhaqan soo jireen ah.
Wararka hoose ee aan heleyno waxay intaasi kusii darayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu Raysal wasaarahiisa u magacaabi doono saacadaha nagu soo aadan shaqsi kasoo jeeda maamulada Puntland ama Jubbaland.
Previous articleNuur Axmed oo u dhashay Afgaanistaan waxa uu Baaskiil ku tagay Makkah si uu xajiyo!
Next articleLabada Gole BFS oo maanta iska dhex xulaya Guddi KMG ah oo kasoo shaqeeya Miisaaniyadda DFS ee 2022.